UMAHLUKO PHAKATHI KWEVARANDA, IPATIO, IDESIKA, IBHALKHONI KUNYE NEVERANDA - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Umahluko phakathi kwevaranda, iPatio, idesika, ibhalkhoni kunye neVeranda
Umahluko phakathi kwevaranda, iPatio, idesika, ibhalkhoni kunye neVeranda
Ngaba uyafuna ukwazi umahluko phakathi kwevaranda, ipatio, ipaki, ibhalkhoni kunye neveranda? Kule minyaka idlulileyo, iindawo zokuhlala zangaphandle sele ziqalisile ukufumana ukuthandwa okukhulu ngokusebenza kunye nobuhle. Abantu baqale ukunika ukubaluleka okukhulu kwiindawo zabo zangaphandle. Nokuba kusehlotyeni okanye ebusika, ezi ndawo ziye zaba yindawo yolonwabo okanye indawo yokuphumla kubahlobo kunye nosapho.
Ezi zakhiwo zangaphandle, nangona ziyinxalenye yendlu, zihlala ziqhotyoshelwe okanye ziqhotyoshelwe kulwakhiwo oluphambili, zigqunyiwe okanye zityhilwe, ngohlobo lweveranda, ipatio, ibhalkhoni, iveranda kunye nomgangatho. Uninzi lwethu luyakucinga ukuba zonke ziyafana kwaye azaziwa. Ewe kuyinyani kodwa kuphela kude kube kwinqanaba elithile. Makhe sijonge umahluko okhoyo phakathi kwale migaqo ukwandisa ulwazi loyilo lwakho kwixesha elizayo xa sibona ipatio, siyibiza ngokuba yipatio hayi iveranda.
Iveranda vs Patio
Idesika Vs Patio
Iveranda sisakhiwo esiphantsi nesogqunywe ngaphandle, ikakhulu esakhiwe ekungeneni kwendlu okanye kwisakhiwo. Ngokwesiqhelo lulwandiso oluvela kulwakhiwo oluphambili kwaye mhlawumbi luvuleke okanye luvalwe ziiscreen, iindonga, i-latticework, iifestile kunye neekholamu.
Abantu baqala ukwakha iveranda endlwini yabo ebutsheni beminyaka yoo-1900. Injongo kunye nokubonakala kweeveranda kwahlukile kwimimandla eyahlukeneyo. Iiporchi zakhiwa ukukhusela izindlu kwiimeko zemozulu ezibi kunye nothuli. Iiporchi zazincinci, zivulekile kwaye zibekwe kwinqanaba elifanayo. Imimandla yoMzantsi-ntshona wasebenzisa iivaranda ukwenza umthunzi wokungena nodonga lonke olusemazantsi.
Iveranda akufuneki ukuba igqunywe. Ngamanye amaxesha zigutyungelwe inxenye kwaye kwimeko yendlu enamabali amabini, ukugquma komgangatho wesibini kunokuba sisigqubuthelo okanye uphahla lwevaranda. Iveranda esukela ngaphambili ukuya kwicala lendlu ibizwa ngokuba sisongelo ejikeleze iveranda.
Apho iveranda evaliweyo ichaphazelekayo, kukho umnyango wesibini okhokelela kwindlu enkulu xa ungene emnyango wokuqala wevaranda. Ezi poranda zifakwe ikakhulu zihlolwe ngaphandle kweglasi okanye ngaphandle kwazo kwaye ngamanye amaxesha zijongwa njengolwandiso olungekho sikweni lwegumbi lokuhlala okanye igumbi.
Iiporchi azisetyenziselwa ukukhusela imeko yemozulu kuphela kodwa zithathwa njengeendawo zokuhlala ezandisiweyo ezinezitulo, ujingi lweveranda, ibhentshi njlnjl. Ngeemeko ezimnandi zithathwa njengendawo efanelekileyo yokunxulumana nomhlobo kunye nabamelwane okanye imimandla yokuphumla.
Ipatio sisakhiwo esingaphandle esincanyathiselwe okanye siqhotyoshelwe kwindlu engundoqo okanye kwisakhiwo kwaye sihlala sakhiwe ngasemva kwendlu. Ngokuyintloko ivulekele esibhakabhakeni kodwa ngamanye amaxesha inophahla oluphezulu lomthunzi kunye nobucala. Yakhiwe kumhlaba okufuphi nolwakhiwo oluphambili okanye kude nje kuwo ubukhulu becala ujikeleze iphuli yokudada okanye imbonakalo yomhlaba kwaye yakhiwe ngamatye agangathiweyo, ikhonkrithi, izitena, amatye okanye iithayile.
Ubukhulu becala iipatiyo zihonjiswe ngezityalo nakwifenitshala yangaphandle kwaye kuba zisetyenziselwa ukutya kunye nokuzonwabisa, zakhiwe kwiindawo ezinokufikelela ngokulula ekhitshini okanye ngasemva kwendlu. Ukuba nekhitshi yangaphandle okanye ukuseta i-barbecue kwipatio ngumbono omkhulu kwabo bahlala bezonwabisa kwiindwendwe. Ungayibona igalari yethu ye Uyilo lwepatio Apha.
Kuba iipatio zibekwe kwinqanaba lomhlaba, akukho mfuneko yokuba zihlangane nayo nayiphi na imigaqo kunye neekhowudi. Bafuna ulondolozo nangona kunjalo, njengoko izitena kufuneka zitshintshwe okanye iithayile kufuneka zipolishiwe okanye zicocwe.
Zintathu iintlobo zeepati ezicetyiswayo
Iipatio zophahla ezithe tyaba ezinceda ukugqitha kwamanzi xa kukho imvula
Iipatios zangoku ezinophahla olugobileyo olwenziwe ngezinto zangoku ezinje ngealuminium
Iipatio zegable kunye nophahla oluphakamileyo
Iveranda iqhotyoshelwe kulwakhiwo olungaphambili kwaye ibekwe ngaphambili kwendlu kungoko ithatha ubume bolwakhiwo oluphambili ngelixa ukuguquguquka kwepatio kukuba inokwahluka ngokobukhulu kunye nokumila kwaye ikhululekile. Zininzi izinto ezininzi kuneveranda ngokwendlela yokusebenza kunye nokuhonjiswa.
Ngelixa usakha iveranda, ngamanye amaxesha kufuneka ulandele ukhuseleko kunye nemigaqo ngelixa iipatiyo azidingi ukulandela loo mithetho kunye neekhowudi. Iiporchi ezingaphezulu kweenyawo ezimbini zifuna ukuthuthwa.
Apho iveranda likhokelela ekungeneni kwendlu, iipatiyo ngamanye amaxesha zakhiwa kufutshane nesakhiwo sentengiso hayi ngaphambili okanye ngasemva kwendlu.
Kuqhelekile ukuba iipheranda ikakhulu ngaphambili kunye neepatios ngasemva kwendlu nangona kungekho mithetho inzima kwaye ikhawulezayo ngokubhekisele kuloo mbono.
Ngubani omele ukumenyelwa kwishower yomtshato
Iidesika zithe tyaba, iqonga elingenophahla elenziwe ngomthi ogqityiweyo, izinto ezidityanisiweyo, umsedare okanye ivinyl, ehlala iqhotyoshelwe endlwini okanye ishiywe njengesakhiwo esizimeleyo. Zihlala ziphakanyisiwe ukusuka kumgangatho womhlaba kwaye zibiyelwe ngokuthuka. Ngokweekhowudi zokwakha indawo esemgangathweni ukuya kwii-intshi ezili-18 inokufuna ukugcwala. I-pergola okanye i-canopy ingasetyenziselwa ukugubungela iidesika.
Enye yezona ndawo zixhaphakileyo nezithandwayo ngaphandle, iidesika zisetyenziselwa ukutya, ulonwabo lwangaphandle kunye neenjongo zokuzonwabisa, i-barbecues kunye nendawo epholileyo kwaye inefanitshala yangaphandle, izityalo kunye nokuhlala.
Kule minyaka idlulileyo, iintlobo zeekhonkco ziye zacaciswa kuyilo olwahlukileyo kunye nesitayile esiza kulungela indlu yakho kunye nendawo esingqongileyo. Jonga igalari yethu engama-50 uyilo lomgangatho wamaplanga kweli phepha.
Iiplatifomu zenziwe zangumlinganiso omnye, zaphakanyiswa emhlabeni kunye okanye ngaphandle kweziporo kwaye zihlala zihonjiswe ngezityalo ukuze zongeze ubuhle kunye nesitayile. Umgangatho wamanqanaba amanqwanqwa uqukethe uthotho lwenqanaba kumanqanaba ahlukeneyo axhumene nezinyuko. Ngokwesiqhelo ifunyenwe enkulu, ngaphezulu kwepropathi yebali elinye okanye njengesakhiwo esizimeleyo esingaphandle.
Umgangatho wamabali amabini unokusetyenziselwa izinto ezininzi, usebenze ngenjongo yolonwabo lwangaphandle kunye nokubonelela ngokufikelela kwicandelo eliphezulu lendlu. Iindawo zokuma simahla zinokufumaneka kude nendlu, eyadini okanye kufutshane nedama lokuqubha, ukubonelela ngendawo yabucala, okanye ukuhlala phakathi kwendalo. Inokuhonjiswa ngezithuba kunye nemiqadi, kunye nenye ifanitshala yangaphandle yokubonelela ngerustic touch kwindawo.
Kukho uluhlu lwe Iinkqubo zoyilo lomgangatho ziyafumaneka kwabo bafuna ukuzama ukwenza uyilo lwasemva kwendlu yabo. Isoftware yasimahla iyafumaneka ukuze uqalise ukucwangcisa uyilo lwakho lwediski kwaye ufumane umbono wento oyithandayo.
Ngelixa iipatio kunye uyilo lomgangatho Zombini zinikezela ngenjongo efanayo yokonwabela ngaphandle, kwaye ziqhotyoshelwe kwaye zixhomekeke kulwakhiwo oluphambili, kukho izinto ezithile ezizodwa nezithintelwe kuhlobo ngalunye.
Iipatios zingakhiwa kusetyenziswa izinto ezahlukeneyo ezinje ngelitye, ikhonkrithi, iibhloko ukupheyiva Ngelixa iidesika ikakhulu zakhiwe ngomthi okanye ngezinto ezidityanisiweyo. Jonga iintlobo ngeentlobo ze Izimvo zepatio apha ukukhuthazwa ngakumbi.
Apho iidesika zihlala zikumgangatho ophakamileyo ngamanyathelo okanye izitepsi, eziqhotyoshelwe ekhaya yileja kwaye zifuna ukugcwala okanye ucingo, iipatiyo azidingi ukuba zithukwe njengoko kufunyanwa kumgangatho womhlaba.
Ngenxa yento esetyenzisiweyo, iidesika zibiza kakhulu ukwakha xa kuthelekiswa neepatios ezinokufuna izinto ezingabizi kakhulu nangona zombini zifuna isixa esithile solondolozo ngenxa yokubakho komngundo kunye nesikhunta kwabo bahlala kwimozulu emanzi.
I-Balcony sisakhiwo esingaphandle, ulwandiso lwendlu okanye izakhiwo kumgangatho ophezulu. Indlu inebhalkhoni engaphezulu kwenye kumgangatho ngamnye. La ngamaqonga aphuma ngaphandle kweendonga zesakhiwo, ezifakwe kwiindonga, ezixhaswe ziikholamu, iiringi okanye iibalustrade ezinemitha enye ukuphakama.
Iibhalkoni zincinci kakhulu ngokobubanzi nobude, ukuphakama okukodwa kunokuba neebhalkhoni ngaphezulu kwesinye. Nangona zingasebenzi kangako ngokubhekisele kulonwabo, iibhalkhoni zakhiwe ezindlwini nasezindlwini njengoko zibonakala ngokwandisa indawo yangaphakathi, zibonelela ngokungenisa umoya, ilanga kunye nendawo yokuhlala (ngophahla oluphezulu). Uvakalelo lokuba awunalo ipatio yakho okanye eyadini yangasemva ayishiywanga ngombono webhalkhoni.
Ngokwesiqhelo ungabeka ifanitshala yangaphandle okanye ujingi ozimeleyo kwibhalkhoni encinci okanye usebenzise ibhalkhoni ebanzi ekuhlaleni kunye nokuzonwabisa.
Ukwakhiwa kweebhalkhoni akudingi migaqo kunye neekhowudi kumazwe amaninzi kwaye into edityanisiweyo kukuba unganakho ukuguquguquka ekuyileni iibhalkhoni ngokukhetha izinto zokuqubha kunye neebalustrade, uyilo kunye nokukhethwa komgangatho onokukhetha kuwo ukusukela kwiithayile, ukutyibilika kweenkuni, ivinyl njl. .
Unokukhetha kwenye yeendlela ezintathu xa usakha ibhalkhoni kuxhomekeke ekusebenzeni
I-balcony yegumbi kunye neebhokisi zeentyatyambo
Iibhalkhoni zeCantilevered -Iprojekthi yeebalconi zeCantilevered ezivela kwisakhiwo esikhulu ngaphandle kwenkxaso ebonakalayo. Ubunzima kunye nomthwalo zixhaswa yi cantilevering isakhiwo eludongeni. Esona sisombululo sixhaphakileyo nesifanelekileyo.
Iibhalkoni ezigciniweyo Ngamanye amaxesha kuthiwa ziibhalkhoni kwiintsika, nangona ezi balcony zingenalo ixabiso lobugcisa, zinciphisa ubunzima kunye nomthwalo kulwakhiwo oluphambili, ngokusebenzisa iikholamu zentsimbi kunye neentsika ukuxhasa ngokuthe nkqo ukwakheka kwebhalkhoni okanye izakhiwo (ukuba zifakwe ezantsi kwenye) .
Iibhalkhoni zeHung - Inketho engaqhelekanga, apho intambo yentsimbi engenasinxi exhonywe kwiindonga ixhasa ibalkoni kwindawo 'yokuxhoma' edityaniswe kwiidigri ezingama-45.
Iveranda liqonga elifulelweyo elihlala liqhotyoshelwe endlwini ukusuka kwelinye icala. Iverandas zihlala zigcinwa zivulekile okanye zifakwe ngaphakathi ngomjelo okanye ngocingo kwaye zilinganiswa ikakhulu kumgangatho ongaphantsi wendlu okanye wesakhiwo.
Iveranda ngamanye amaxesha idlala indima yokunika ukufikelela ngaphambili okanye ukungena ngasemva kwendlu. Kule minyaka idlulileyo abantu basebenzise iveranda ukonwabisa iindwendwe kunye nemisebenzi yangaphandle. Unokuyithatha njengebhalkoni yomgangatho ophantsi. EMelika abantu basebenzisa iveranda ukugcina izinto kanti kumazwe afana ne-India idlala indima ebalulekileyo yendawo apho wamkela iindwendwe zakho.
Indlela eyaziwayo yokwakha eNew Orleans ebizwa ngokuba yiCreole Townhouse yaziwa ngezakhiwo zayo zedolophu kunye nezindlu ngezitena okanye umsebenzi we-stucco, iibhalkhoni zentsimbi kunye nokusetyenziswa okubonakalayo kweeverandas. Ukuyila iveranda yekhaya lakho kunye nokukhetha isitayile kunye nenkangeleko kuya kukhulisa ngokuthe ngcembe ukubukeka kwekhaya lakho.
Uluhlu apha ziindidi ezimbalwa zeeranda zokuncoma ikhaya lakho
Igobile - ekwabizwa ngokuba yiveranda ye-bullnose, yenye yezona ndlela ziphambili zesitayile severanda ezinokuncanyathiselwa ekhayeni okanye ekuma simahla. Inemigca egudileyo, egobileyo eyenza i-convex canopy ngaphezulu kweqonga elingaphandle. Inika indawo yokuhlala elangeni kwangaxeshanye inika imvakalelo entle enophahla olusicaba olungayi kuthanda. Ukongeza unokudibanisa nolunye uhlobo lweeveranda ezinje ngophahla olusicaba ukunika isimbo esingaqhelekanga.
IVeranda enophahla lwendlu
Gable -Ikwabizwa ngokuba sisimbo sophahla olumiselweyo, sinophahla oluthambisayo olonyusa ubuhle bophahla lwendlu yakho. Ihlala yenziwe ngamaphepha acocekileyo ophahla ukuze inike igumbi elinelanga. Nangona kunjalo, ezinye izinto ezithandwayo ezisetyenziswayo kulwakhiwo zii-aluminium, amaphepha esinyithi kunye neenkuni.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex - olona hlobo lulula kodwa olwahlukileyo lokuphahla olunokuxhasa naluphi na uhlobo lwendawo yangaphandle nolwakhelwe nakuphi na ubukhulu. Inokudityaniswa nezinye iindidi zophahla lweveranda ezinje ngegable okanye igophe.
Uhlobo lwevergola iveranda
Pergola - ukuguquguquka kukuba akufuneki ukuba kuqhotyoshelwe ekhayeni lakho kunye nophahla olubotshiweyo, isitayile se-pergola sinokuzisa ukukhanya kunye nomoya ngelixa unika umthunzi kunye nobuhle bokubukeka kwindawo yakho yangaphandle. Ndwendwela apha ngaphezulu izimvo ze-pergola eyadini yakho yangasemva.
Ipeyinti yamachibi kunye neveranda
Inkundla - TO Uyilo lwebhulukhwe iveranda sisakhiwo esizimeleyo, esongeza ukongezwa okubonakalayo kwiveranda nakwikhaya lakho. Uyilo oluntsonkothileyo olunophahla olugudisiweyo olunamacandelo acacileyo anceda ukuhambisa ukukhanya kwelanga okuninzi kwisithuba. Olu hlobo lunokwakhiwa ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo lwegazebo ezinje ngesikwere kunye ne-octagon. Bona Okuninzi Uyilo lwegazebo kweli phepha legalari.
useta nini umhla we-rsvp womtshato
Imfusa kunye nesinxibo somtshakazi
Unyana kunye nomama iingoma zomdaniso womtshato
umtshato umbulela ikhadi kubazali